Nei Mwari Akapa Jesu Serudzikinuro (1 VaKorinde 15) | Swedera Pedyo
1, 2. Bhaibheri rinorondedzera sei mamiriro ezvinhu evanhu, uye ndeipi nzira bedzi yokubuda nayo?
“ZVISIKWA zvose zvinoramba zvichigomera pamwe.” (VaRoma 8:22) Nemashoko iwayo muapostora Pauro anorondedzera mamiriro ezvinhu anonzwisa urombo atiri kuzviona tiri maari. Mukuona kwevanhu kunoratidzika sokusina nzira yokubuda nayo mukutambura, chivi, uye rufu. Asi Jehovha haagumirwi somunhu. (Numeri 23:19) Mwari weruramisiro akatigovera nzira yokubuda nayo munhamo yedu. Inonzi rudzikinuro.
2 Rudzikinuro ndicho chipo chaJehovha chikuru pane zvose zvaakapa vanhu. Runoita kuti kusunungurwa kwedu muchivi norufu kubvire. (VaEfeso 1:7) Ndirwo hwaro hwetariro youpenyu husingaperi, kungava kudenga kana kuti muparadhiso yepasi. (Ruka 23:43; Johani 3:16; 1 Petro 1:4) Asi rudzikinuro chii chaizvo? Runotidzidzisa sei pamusoro peruramisiro yakakura yaJehovha?
Chakaita Kuti Padikanwe Rudzikinuro
3. (a) Nei kwakazodiwa rudzikinuro? (b) Nei Mwari aisagona kungochinja chirango chorufu pavana vaAdhamu?
3 Rudzikinuro rwakazodikanwa nemhaka yechivi chaAdhamu. Nokusateerera Mwari, Adhamu akapa vana vake nhaka yourwere, kusuruvara, marwadzo, uye rufu. (Genesi 2:17; VaRoma 8:20) Mwari aisagona kungonzwa tsitsi ochinja mutongo worufu. Kuita kudaro kwaizova kusatevera mutemo wake pachake unoti: “Mubayiro unoripa chivi rufu.” (VaRoma 6:23) Uye kudai Jehovha aizoita kuti mitemo yake yeruramisiro isashanda, bongozozo nokusateerera mutemo munyika yose zvaizobata ushe!
4, 5. (a) Satani akachera Mwari sei, uye nei Jehovha aifanira kupindura pomero idzodzo? (b) Satani akapomera vashumiri vaJehovha vakavimbika chii?
4 Sezvataona muChitsauko 12, kupandukira kwomuEdheni kwakatomutsa nyaya hombe. Satani akapomera zita raMwari rakanaka. Nokudaro akapomera Jehovha kuva murevi wenhema nomutongi ane utsinye anongoita zvokurayira achitorera zvisikwa zvake rusununguko. (Genesi 3:1-5) Nokuita seakonesa chinangwa chaMwari chokuzadza nyika nevanhu vakarurama, Satani akapomerawo Mwari kuti akanga akundikana. (Genesi 1:28; Isaya 55:10, 11) Kudai Jehovha akanga angosiya zvaaipomerwa izvi zvisina kupindurwa, zvisikwa zvake zvizhinji zvinofunga zvingangodaro zvakarasawo chivimbo mukutonga kwake.
5 Satani akacherawo vashumiri vakavimbika vaJehovha, achivapomera kuti vaishumira Jehovha nokuda kwevavariro dzoudyire bedzi uye kuti kudai vaizomanikidzwa, hapana nomumwe wavo aizoramba akavimbika kuna Mwari. (Jobho 1:9-11) Nyaya idzi dzaikosha zvikuru kupfuura kuomerwa kwomunhu. Jehovha nenzira yakakodzera akanzwa kuda kupindura pomero dzokuchera dzaSatani. Asi Mwari aizogona kugadzirisa nhau idzi sei uyewo oponesa vanhu?
6. Ndeapi mamwe emashoko anoshandiswa muBhaibheri kurondedzera nzira yaMwari yokuponesa nayo vanhu?
6 Kugadzirisa zvinhu kwaJehovha kwaiva nengoni zvikuru uye kwakarurama chaizvo—uko kusina chero munhu angadai akakuronga. Asi, kwaiva nyore zvikuru. Kunowanzotaurwa nezvako sokutenga, kuyananisa, uye kudzikinura. (Pisarema 49:8; Dhanieri 9:24; VaGaratiya 3:13; VaKorose 1:20; VaHebheru 2:17) Asi pamwe shoko rinonyatsorondedzera zvinhu nomazvo nderakashandiswa naJesu pachake. Akati: “Mwanakomana womunhu akauya, kwete kuzoshumirwa, asi kuzoshumira nokupa mweya wake kuti uve rudzikinuro [chiGiriki, lyʹtron] mukutsinhana nevakawanda.”—Mateu 20:28.
7, 8. (a) Shoko rokuti “rudzikinuro” rinorevei muMagwaro? (b) Munzirai umo rudzikinuro runobatanidza kuenzana?
7 Rudzikinuro chii? Shoko rechiGiriki rakashandiswa pano rinobva pashoko rechiito rinoreva “kusunungura, kuregedza.” Shoko iri raishandiswa kureva mari yaibhadharwa nokuda kwokusunungurwa kwevasungwa vehondo. Saka naizvozvo, rudzikinuro runogona kurondedzerwa sechimwe chinhu chinobhadharwa kuti udzose chimwe chinhu. MuMagwaro echiHebheru, shoko rokuti “rudzikinuro” (koʹpher) rinobva pashoko rechiito rinoreva “kufukidza.” Somuenzaniso, Mwari akaudza Noa kuti aifanira ‘kunama’ (rudzi rweshoko rakafananawo nerokuti kufukidza) areka netara. (Genesi 6:14) Izvi zvinotibatsira kunzwisisa kuti kudzikinura kunoreva kufukidza zvivi.—Pisarema 65:3.
8 Zvinonzwisisika kuti Theological Dictionary of the New Testament rinotaura kuti shoko iri (koʹpher) “nguva dzose rinoratidza chinhu chakaenzana,” kana kuti chinoenzanirana. Saka, chidziviro cheareka yesungano chaiva nechimiro chaienzanirana neareka yacho. Saizvozvowo, nokuda kwokudzikinura, kana kuti kufukidza chivi, mutengo unofanira kuripirwa unonyatsoenzana, kana kuti unonyatsofukidza chakanganiswa nechivi. Mutemo waMwari kuna Israeri nokudaro waitaura kuti: “Upenyu hunofanira kutsihwa noupenyu, ziso neziso, zino nezino, ruoko noruoko, rutsoka norutsoka.”—Dheuteronomio 19:21.
9. Nei varume vaiva nokutenda vakabayira zvibayiro zvemhuka, uye Jehovha akaona sei zvibayiro zvakadaro?
9 Varume vaiva nokutenda kubva kuna Abheri zvichienda mberi vakapa mhuka dzezvibayiro kuna Mwari. Mukuita kudaro, vakaratidza kuziva kwavo chivi uye kudikanwa kworudzikinuro, uye vakaratidza kutenda kwavo muchipikirwa chaMwari chorusununguko achishandisa “mbeu” yake. (Genesi 3:15; 4:1-4; Revhitiko 17:11; VaHebheru 11:4) Jehovha aitarisa zvibayiro zvakadaro achizvifarira ndokuratidza kutendera kwake vanamati ava. Kunyange zvakadaro, zvibayiro zvemhuka, kunyange zvakanakisisa, zvaingova zvechirango. Mhuka dzaisagona kufukidza chaizvo chivi chomunhu nokuti dzakaderera pavanhu. (Pisarema 8:4-8) Nokudaro, Bhaibheri rinoti: “Hazvibviri kuti ropa renzombe nerembudzi ribvise zvivi.” (VaHebheru 10:1-4) Zvibayiro zvakadaro zvaingova mufananidzo wechibayiro chorudzikinuro rwechokwadi rwaizouya.
10. (a) Mudzikinuri aifanira kuenzana naani, uye nei? (b) Nei chibayiro chomunhu mumwe bedzi chaidikanwa?
10 “Vose vari kufa muna Adhamu,” akadaro muapostora Pauro. (1 VaKorinde 15:22) Naizvozvo rudzikinuro rwaifanira kubatanidza rufu rweakanyatsoenzana naAdhamu—munhu akakwana. (VaRoma 5:14) Hapana chisikwa chorumwe rudzi chaigona kuenzanisa chikero cheruramisiro. Munhu akakwana bedzi, mumwe akanga asiri muchirango chorufu rwaAdhamu, ndiye aigona kupa “rudzikinuro runoenzanirana”—rwaienzanirana zvakakwana naAdhamu. (1 Timoti 2:6) Zvaisazodikanwa kuti mamiriyoni asingaverengeki evanhu apirwe sezvibayiro kuitira kuti aenzane nomwana mumwe nomumwe waAdhamu. Muapostora Pauro akatsanangura kuti: “Chivi [chakapinda] munyika nemhaka yomunhu mumwe [Adhamu] norufu nemhaka yechivi.” (VaRoma 5:12) Uye “sezvo rufu ruripo nemhaka yomunhu,” Mwari akaita kuti kudzikinurwa kwevanhu kuve “kuripowo nemhaka yomunhu.” (1 VaKorinde 15:21) Sei?
“Rudzikinuro runoenzanirana nokuda kwavose”
11. (a) Mudzikinuri ‘aizoravira rufu nokuda kwevanhu vose’ sei? (b) Nei Adhamu naEvha vangadai vasina kubatsirwa norudzikinuro? (Ona mashoko omuzasi.)
11 Jehovha akaronga kuti ave nomunhu akakwana akapa upenyu hwake nokuzvidira sechibayiro. Maererano naVaRoma 6:23, “mubayiro unoripa chivi rufu.” Mukubayira upenyu hwake, mudzikinuri ‘aizoravira rufu nokuda kwevanhu vose.’ Nemamwe mashoko, aizoripa mubayiro wechivi chaAdhamu. (VaHebheru 2:9; 2 VaKorinde 5:21; 1 Petro 2:24) Pamutemo izvi zvaizova nemigumisiro yakakura. Nokubvisa chirango chorufu pavana vaAdhamu vanoteerera, rudzikinuro rwaizobvisa simba rokuparadza rechivi kubva pamudzi wacho chaipo. *—VaRoma 5:16.
12. Ipa muenzaniso wokuti kubhadharwa kwechikwereti chimwe kunobatsira sei vanhu vakawanda.
12 Kupa somuenzaniso: Fungidzira kuti unogara mutaundi umo vazhinji vanogaramo vanoshanda pane imwe fekitari huru. Iwe nevavakidzani vako munobhadharwa zvakanaka nokuda kwebasa renyu uye munorarama upenyu hwakanaka. Zvinodaro kusvika zuva iro fekitari yacho inovharwa. Nokuda kwechikonzero chei? Maneja wefekitari yacho apinda muuori, achiita kuti bhizimisi racho ribhuroke. Kamwe kamwe mapererwa nebasa, iwe nevavakidzani vako hamuchagoni kubhadhara zvikwereti. Madzimai, vana, nevakakukweretesai vanotambura nemhaka youori hwomunhu mumwe. Pane nzira yokubuda nayo here? Hungu! Mumwe munhu ane mari yokuti abatsire anosarudza kupindira. Anonzwisisa kukosha kwekambani yacho. Anonzwirawo tsitsi vashandi vayo vakawanda nemhuri dzavo. Naizvozvo anoronga kubhadhara chikwereti chekambani yacho ovhurazve fekitari yacho. Kudzimwa kwechikwereti chimwe ichocho kunobatsira vashandi vazhinji nemhuri dzavo uye vakavakweretesa. Saizvozvowo, kudzimwa kwechikwereti chaAdhamu kunobatsira mamiriyoni asingaverengeki.
Ndiani Anopa Rudzikinuro?
13, 14. (a) Jehovha akagovera vanhu rudzikinuro sei? (b) Rudzikinuro runobhadharwa kunaani, uye nei kubhadhara kwakadaro kuchikosha?
13 Jehovha bedzi ndiye aigona kugovera “Gwayana . . . rinobvisa chivi chenyika.” (Johani 1:29) Asi Mwari haana kungotumira chero ngirozi kuti izonunura vanhu. Asi akatumira Munhu aigona kupa mhinduro inogutsa, yokupedzisira kune zvaipomerwa vashumiri vaJehovha naSatani. Hungu, Jehovha akaita chibayiro chikuru chokutumira Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga, “aimufadza.” (Zvirevo 8:30) Nokuzvidira, Mwanakomana waMwari “akazvidurura” kubva pakuva wokudenga. (VaFiripi 2:7) Nenzira inoshamisa, Jehovha akatamisa upenyu nounhu hwomwanakomana wake wedangwe wokudenga kuenda kunhumbu yemhandara yechiJudha yainzi Mariya. (Ruka 1:27, 35) Somunhu, aizonzi Jesu. Asi mupfungwa yepamutemo, aigona kunzi Adhamu wechipiri, nemhaka yokuti akanga akaenzana zvakakwana naAdhamu. (1 VaKorinde 15:45, 47) Jesu naizvozvo aigona kuzvipa kuva chibayiro chorudzikinuro nokuda kwevanhu vanotadza.
14 Rudzikinuro irworwo rwaizobhadharwa kunaani? Pisarema 49:7 rinonyatsotaura kuti rudzikinuro runobhadharwa kuna “Mwari.” Asi Jehovha haasi iye anotanga kuronga nezvorudzikinuro here? Hungu, asi izvi hazvideredzi rudzikinuro kuti rungova kuchinjanawo hako kusina basa—zvakadai sokutora mari kubva mune imwe homwe woiisa mune imwe. Zvinofanira kunzwisiswa kuti rudzikinuro hakusi kuchinjanisa zvinhu, asi chiito chepamutemo. Nokupa muripo worudzikinuro, kunyange nokurasikirwa kwake kukuru, Jehovha akasimbisa kutsigira kwake kusingazununguki ruramisiro yake yakakwana.—Genesi 22:7, 8, 11-13; VaHebheru 11:17; Jakobho 1:17.
15. Nei zvakanga zvichikosha kuti Jesu atambure nokufa?
15 Muchirimo cha33 C.E., Jesu Kristu nokuzvidira akabvuma nhamo yakatungamirira kukubhadharwa kworudzikinuro. Akabvuma kusungwa achipomerwa nhema, akanzi aiva nemhosva, ndokuroverwa padanda rokuurayira. Zvakanga zvichidiwa here chaizvo kuti Jesu atambure kudaro? Hungu, nemhaka yokuti nhau yokuvimbika kwevashumiri vaMwari yaida kugadzikiswa. Zvinokosha kuti Mwari haana kubvumira rusvava Jesu kuurayiwa naHerodhi. (Mateu 2:13-18) Asi apo Jesu akanga ava munhu mukuru, akakwanisa kutsungirira simba rose rokurwisa kwaSatani achinyatsonzwisisa nhau dzacho zvizere. * Nokuramba “akavimbika, asina mhaka, asina kusvibiswa akaparadzaniswa nevanhu vanoita zvivi” pasinei nokubatwa noutsinye, Jesu akaratidza zvakakwana kuti Jehovha ane vashumiri vanoramba vakatendeka pakuedzwa. (VaHebheru 7:26) Saka, hazvishamisi kuti chinguvana asati afa, Jesu akadanidzira norukundo kuti: “Zvaitika!”—Johani 19:30.
Kupedza Basa Rake Rokudzikinura
16, 17. (a) Jesu akapfuudzira sei basa rake rokudzikinura? (b) Nei zvakanga zvichikosha kuti Jesu aoneke “pamberi paiye Mwari nokuda kwedu”?
16 Jesu aifanira kuzopedza basa rake rokudzikinura. Pazuva rechitatu Jesu afa, Jehovha akamumutsa kuvakafa. (Mabasa 3:15; 10:40) Nechiito chinokosha ichi, Jehovha haana kupa Mwanakomana wake mubayiro chete nokuda kwebasa rake rokutendeka asi akamupa mukana wokupedzisa basa rake rokudzikinura soMupristi Mukuru waMwari. (VaRoma 1:4; 1 VaKorinde 15:3-8) Muapostora Pauro anotsanangura kuti: “Pakauya Kristu somupristi mukuru . . . akapinda, aiwa, kwete neropa rembudzi nerenzombe duku, asi neropa rake pachake, kamwe chete zvechigarire munzvimbo tsvene akatiwanira kununurwa kusingaperi. Nokuti Kristu akapinda, kwete munzvimbo tsvene yakaitwa nemaoko, iri mufananidzo weiri chaiyoiyo, asi mudenga chaimo, zvino kuti aoneke pamberi paiye Mwari nokuda kwedu.”—VaHebheru 9:11, 12, 24.
17 Kristu aisagona kuenda neropa rake chairo kudenga. (1 VaKorinde 15:50) Asi, akatora zvaimirirwa neropa iroro: ukoshi hwepamutemo hwoupenyu hwake hwomunhu hwakabayirwa. Zvadaro, pamberi paMwari, akanopa ukoshi hwoupenyu ihwohwo sorudzikinuro kuchinjana nevanhu vanotadza. Jehovha akagamuchira chibayiro ichocho here? Hungu, uye izvi zvakava pachena paPendekosti ya33 C.E., apo mudzimu mutsvene wakadururwa pavadzidzi vanenge 120 muJerusarema. (Mabasa 2:1-4) Kunyange zvazvo izvozvo zvakanga zvichifadza, rudzikinuro ipapo rwakanga ruchiri kutotanga kubatsira nenzira inoshamisa.
18, 19. (a) Mapoka api maviri evanhu anobatsirwa nokuyananisa kunoitwa kuti kubvire neropa raKristu? (b) Nokuda kweavo ve“boka guru revanhu,” ndezvipi zvimwe zvavanobatsirwa nazvo zvino nomunguva yemberi norudzikinuro?
18 Mutsamba yake kuvaKorose, Pauro anotsanangura kuti Mwari akaona zvakanaka nokuna Kristu kuzviunganidzira zvimwe zvinhu zvose nokuita rugare kuburikidza neropa rakadeurwa naJesu padanda rokutambudzira. Pauro anotsanangurawo kuti kuyanana uku kunosanganisira mapoka maviri akajeka evanhu, kureva, “zvinhu zviri kumatenga” uye “zvinhu zviri pasi.” (VaKorose 1:19, 20; VaEfeso 1:10) Boka rokutanga iroro rinoumbwa nevaKristu 144 000 vanopiwa tariro yokushumira sevapristi vokudenga uye vachitonga semadzimambo pamusoro pepasi naKristu Jesu. (Zvakazarurwa 5:9, 10; 7:4; 14:1-3) Kuburikidza navo kubatsira kworudzikinuro zvishoma nezvishoma kuchashanda kuvanhu vanoteerera kwechiuru chemakore.—1 VaKorinde 15:24-26; Zvakazarurwa 20:6; 21:3, 4.
19 “Zvinhu zviri pasi” ndivo vanhu vari kutarisira kuzowana upenyu hwakakwana muParadhiso pasi pano. Zvakazarurwa 7:9-17 inovarondedzera ichivati “boka guru revanhu” vachapona pa“kutambudzika kukuru” kuri kuuya. Asi hazvidi kuti vamirire kusvika panguva iyoyo kuti vabatsirwe norudzikinuro. Vakato“geza nguo dzavo refu vakadziita chena muropa reGwayana.” Nemhaka yokuti vanotenda rudzikinuro, zvino vari kutogamuchira zvinobatsira zvomudzimu kubva pachipo chorudo ichocho. Vakaitwa vakarurama seshamwari dzaMwari! (Jakobho 2:23) Somugumisiro wechibayiro chaJesu, vanogona ‘kuswedera norusununguko rwokutaura kuchigaro choumambo chomutsa usina kufanirwa.’ (VaHebheru 4:14-16) Pavanokanganisa, vanokanganwirwa zvechokwadi. (VaEfeso 1:7) Pasinei nokusakwana, vanofara nokuva nehana yakachena. (VaHebheru 9:9; 10:22; 1 Petro 3:21) Saka kuyananiswa naMwari hachisi chimwe chinhu chiri kungotarisirwa, asi chinhu chiri kutoitika! (2 VaKorinde 5:19, 20) Mukati meMireniyamu zvishoma nezvishoma vacha“sunungurwawo muuranda hwokuora” uye pakupedzisira vacha“va norusununguko rune mbiri rwevana vaMwari.”—VaRoma 8:21.
20. Kufungisisa nezvorudzikinuro kunokuita kuti unzwe sei iwe pachako?
20 “Mwari ngaaongwe nokuna Jesu Kristu” nokuda kworudzikinuro! (VaRoma 7:25) Kushanda kworudzikinuro kuri nyore, asi kwakadzama zvakakwana zvokutishamisa kwazvo. (VaRoma 11:33) Uye nokurufungisisa kwedu nokuonga, rudzikinuro runobaya mwoyo yedu, ruchiramba ruchitiswededza pedyo naMwari weruramisiro. Kufanana nomunyori wepisarema, tine zvikonzero zvakawanda zvokurumbidza Jehovha se“unoda kururama nokururamisa.”—Pisarema 33:5.
^ ndima 11 Adhamu naEvha vangadai vasina kubatsirwa norudzikinuro. Mutemo waMosesi waitaura nheyo iyi pamusoro pemhondi yemaune: “Uye hamufaniri kugamuchira dzikinuro pamusoro poupenyu hwomuurayi, unofanira kuti aurawe.” (Numeri 35:31) Sezviri pachena, Adhamu naEvha vaifanira kufa nemhaka yokuti vachiziva uye vachida vakarega kuteerera Mwari. Nokudaro vakarasa tariro yavo youpenyu husingaperi.
^ ndima 15 Kuitira kuti aenzanise chivi chaAdhamu, Jesu aifanira kufa, kwete somwana akakwana, asi somurume akakwana. Yeuka, chivi chaAdhamu chaiva chemaune, chakaitwa achinyatsoziva zvizere kukomba kwechiito chacho nemigumisiro yacho. Naizvozvo kuitira kuti ave “Adhamu wokupedzisira” ofukidza chivi ichocho, Jesu aifanira kusarudza somunhu akura, achiziva, kuti arambe akavimbika kuna Jehovha. (1 VaKorinde 15:45, 47) Naizvozvo upenyu hwose hwokuvimbika hwaJesu—kusanganisira rufu rwake rwechibayiro—zvakashanda so“kururamisira kumwe.”—VaRoma 5:18, 19.
Numeri 3:39-51 Nei zvichikosha kuti rudzikinuro runyatsoenzanirana zvakakwana?
Pisarema 49:7, 8 Nei tine chikwereti kuna Mwari nokuda kwokugovera rudzikinuro?
Isaya 43:25 Rugwaro urwu runotibatsira sei kuona kuti ruponeso rwomunhu handicho chikonzero chikuru nei Jehovha akagovera rudzikinuro?
1 VaKorinde 6:20 Rudzikinuro runofanira kutiita kuti tive nomufambiro nemararamiro zvakaita sei?